तपाईं कस्तो बैंकर ? – BikashNews
तपाईं कस्तो बैंकर ?
२०७७ चैत २५ गते १७:३३ सुशिल घिमिरे ‘त्रैलोक्य’
काठमाडौं । सामान्यतया जो मान्छे दैनिक रुपमा काम गर्छ अनि सो काम गरेबापतको पारिश्रमिक मासिक रुपमा लिन्छ उसैलाई हामी कर्मचारी भन्ने गर्छौं । उसले आफू काम गर्ने संस्थामा नगद लगानी गरेको त हुँदैन तरपनि आफ्नो बौद्धिक श्रम चाहिँ खर्चेको हुन्छ । कुनैपनि कर्मचारीले संस्थाको नाफा र घाटामा प्रत्यक्ष हकदावी गर्न पाउँदैन भने संस्थागत निर्णयमा पनि उसको अधिकार हुँदैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि एउटा संस्था अगाडि वढाउनमा भने कर्मचारीहरुको नै अहम् भुमिका रहने गर्दछ ।
सबै संस्थामा कर्मचारी हुन्छन् । ती कर्मचारीहरु फरक वौद्धिकता, फरक विचार, फरक पृष्ठभुमीबाट आएर एकै ठाउँमा जम्मा भई काम गर्ने हुनाले एउटाको भन्दा अर्कोको काम गर्ने शैली, स्पीड, निर्णयक्षमता लगायतका कुराहरु फरक हुने गर्दछ । यसरी कर्मचारीमा पाइने विविधताले गर्दा संस्थालाई केहि हदसम्म राम्रो पनि भइरहेको हुन्छ । काम र महत्वकांक्षाको आधारमा कर्मचारीहरु सामान्यतया तीन किसिमका हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । र, आज हामी कर्मचारीका त्यही तीनवटा किसिमलाई यस लेखमार्फत् उजागर गर्न गइरहेका छौं । जुन हरेक संघ वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागु हुन्छ ।
अह्राएको काम लुरुलुरु गरिरहने कर्मचारी – हरेक कार्यालयमा केही कर्मचारीहरु यस्ता हुन्छन् जो गफ गर्नुभन्दा अनि चाकरी चाप्लुसी गर्नुभन्दा पर रहेर समयमै कार्यालय छिर्ने र दायाँबायाँ नसोची हाकिमले अह्राएको काम लुरुलुरु गरिरहन्छन् । वास्तवमा यस्ता कर्मचारी अरुका तुलनामा मेहेनती पनि हुन्छन् । जिम्मेवारी वहन गर्ने स्वभाव त यिनको हुन्छ नै साथै लोभलालचमा नपर्ने अनि संस्थाले के दियो भन्दा पनि संस्थालाई मैले के दिएँ भनि चिन्तन् गरिरहन्छन् ।
यस्ता स्वभावका कर्मचारी नबिराउने र कसैसँग पनि नडराउने भएकोले पनि अलि स्वभिमानी देखिन्छन् । हुन त यस्ता स्वभावका कर्मचारीले जति नै कडा मिहिनेत गरेपनि उनीहरु हाकिमको नजरबाट भने सधैं नै छायाँमा परिरहन्छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वास्तवमा त्यही कर्मचारी नै संस्थामा लामो समयसम्म अडिइरहन्छन् । संस्थाको लागि पनि यिनै कर्मचारी नै वास्तविक सम्पत्ति पनि हुन् ।
महत्वकांक्षी र अवसरवादी कर्मचारी: एक खालका कर्मचारी त्यस्ता हुन्छन् जो उच्च महत्वकांक्षी, काम गर्नुभन्दा पनि कसरी चाँडो फड्को मार्न सकिन्छ भनि सोचिरहने, संस्थालाई आफ्नो ठान्नुभन्दा पनि कसरी प्रमोशन खान पाइन्छ भनी विचार गर्ने तथा अर्को कुन संस्थामा नोकरी खुलेको छ भनी चनाखो भइरहने खालका हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरु एकै ठाउँमा लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन् । व्यक्तिगत रुपमा भने यस्तै कर्मचारीले प्रगति गरिरहेका हुन्छन् तर संस्थालाई यस्ता कर्मचारीका कारण कालान्तरमा घाटा नै हुने गर्दछ ।
गफाडी र चाप्लुसीबाज कर्मचारी: एक खालका कर्मचारी त्यस्ता हुन्छन् जो कामभन्दा बढी गफ गर्न रुचाउने, आफ्नो डिपार्टमा नबसेर अरुको डिपार्ट पनि चहार्ने, काम गर्नेलाई पनि अलमल्याउने, जिम्मेवारीको वोध नगर्ने तर आफुभन्दा ठुला हाकिमलाई चाप्लुसी गर्ने र अन्य स्टाफका कुरा लगाउने लगायतका काममा रुची राख्ने गर्छन् । नेता खालका स्वभाव देखाउनका लागि हाट्टहुट्ट गर्ने तथा कार्यालयको काम सम्वन्घी थोरै ज्ञान भएका यस्ता कर्मचारी पनि संस्थाका लागि हितकर हुँदैनन् ।
प्रत्येक कर्मचारीको बानी आफैंमा फरक हुने भएकोले तपाईं कस्तो बानीबेहोराको कर्मचारी बन्ने हो भन्ने कुरा तपाईं आफैंमा निर्भर हुन्छ । हाकिमले पनि को कर्मचारी कस्तो छ, कस्तोलाई कुन जिम्मेवारी दिने, कसलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने भन्ने कुरा नजिकबाट नियालिरहनु पर्ने हुन्छ । नत्रभने काम गर्ने कर्मचारीले गरिरहन्छ अनि गफ गर्नेले चाहिँ साहुलाई आँखामा छारो हाल्दै आफूलाई राम्रो देखाइरहने प्रयत्न गरिरहन्छ । यदी यस्तो कार्य लामो समयसम्म चलिरहन्छ भने राम्रा र मेहेनती कर्मचारीहरु ओझेलमा पर्दै जाने मात्र होइन भविष्यमा फ्रस्ट्रेशनको शिकार नबन्लान् पनि भन्न सकिँदैन ।